Cabdirashiid Janan oo gaarey Beledxaawo kulamo xasaasi ahna la leh taliye Fahad Yaasiin . - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta Cabdirashiid Janan oo gaarey Beledxaawo kulamo xasaasi ahna la leh taliye Fahad...
Cabdirashiid Janan oo gaarey Beledxaawo kulamo xasaasi ahna la leh taliye Fahad Yaasiin .
Wasiirkii hore ee amniga Maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan iyo Taliyaha Hay’adda Nabadsugida NISA Fahad Yaasiin Xaaji ayaa haatan waxaa uu kulan Albaabada u xiran yihiin uga socdaa degmada Balad-xaawo ee Gobolka Gedo.
Taliye Fahad Yaasiin iyo wafdi Saraakiil ah oo uu hoggaaminayay ayaa Maanta gaaray degmada Doolow, iyagoona uga sii gudbay dhinaca Balad-xaawo oo uu tegay Cabdirashiid Janan, sida ay sheegayaan wararka la helayo.
Wararka ayaa sheegaya in kulanka u socda Fahad iyo Janan uu dhameystir u yahay heshiis dhexmaray dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Janan, waxaana la filayaa in C/rashiid Janan galabta la keeno Magaalada Muqdisho.
Sidoo kale Doolow ayaa haatan waxaa ku sugan wafdi ka socda dowladda Federaalka, iyagoona qeyb ka ah Mas’uuliyiinta Caasimadda dalka keeni doona Wasiirkii hore ee amniga Maamulka, iyadoo diyaaradda qaadi laheyd ay taagan tahay Garoonka degmadaas.